Maitiro ekugadzirisa iyo data inoratidzwa paunenge uchigadzira nyowani yekuonana | Ndinobva mac
Maitiro ekugadzirisa iyo data inoratidzwa paunenge uchigadzira nyowani yekuonana
Paunenge uchigadzira mutsva wekuonana, muzviitiko zvakawanda, isu tinongozadza iyo nhamba yefoni, tichisiya parutivi email. Izvi zvinodaro nekuti kazhinji, vashandisi varega kushandisa email kuburikidza neWhatsApp, chimwe chinhu icho Isu tinogona kuzvitora sezvakajairika kana iyo odhiyo yekuchengetedza wekubata isiri yehunyanzvi
Kana iyo ajenda yeMac yedu yakanangana nekushandisa kwehunyanzvi, zvinowanzoitika kuti kuwedzera kune iyo nhamba yefoni, isu zvakare tine kukosha kwekuwedzera mamwe data, kuwedzera kune email. Kana isu tichida kuwedzera mutsva wekutaurirana kukerenda yedu, macOS inotiratidza nenzira yekumisikidza minda yekumisikidza natively, izvo zvakajairika.
Neraki, macOS, kusiyana neIOS, inotibvumidza kuti tichinje inova minda yatinoda kuratidza pese pese patinoda kuwedzera kuonana kutsva kuchirongwa chedu, kuti tirege kuita juggle patinenge tichifanira kuwedzera minda isingawanikwe mune yekutaurirana faira.
Wedzera minda mitsva paunenge uchigadzira mutsva wekutaurirana
Kana tangovhura application yekudyidzana, isu tinofanirwa kuenda kune iyo zvido iko kunyorera kuburikidza neyepamusoro menyu bar, kudzvanya paVanoshamwaridzana uye Zvaunofarira.
Ipapo tinoenda kune iyo tab Matura. Iyi tebhu inoratidza zvese zvakasarudzika minda inoonekwa kana tichida kuwedzera nyowani yekuonana kune yedu ajenda.
Kana tichida kudzima Zvimwe zveavo zvinoratidzwa isu tinongofanira tinya pachiratidzo chakarambidzwa kuti tivanze.
Kana tichida kuwedzera imwe ndima nyowani, isu tinofanirwa kudzvanya pakudonhedza uko kunoratidzwa muchikamu chepamusoro kuruboshwe chewindi uye tinya pane iyo yatiri kuda kuwedzera.
Kana munda watovepo asi isu tinoda kuwedzera imwe nyowani, isu tinofanirwa kubaya pane yekuwedzera chiratidzo pamberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzirisa iyo data inoratidzwa paunenge uchigadzira nyowani yekuonana
Tim Cook anosimbisa vanopfuura mamirioni makumi mashanu vashandisi paApple Music
Maitiro ekuwedzera nhamba yevhiki muKarenda application